N'ogbe Eletriki ịdị elu mgbanwe kọmputa oche nlereanya HA-01 emeputa na Supplier |Ụba abụọ
Nlereanya oche kọmpụta nwere ike imegharị ịdị elu eletrik Model HA-01
Agba:Ogologo-nwere ike idozi
Akụkụ ngwaahịa:140x 60 x (75-120) cm
Ibu ihe:66.2 pound
• Desktọ na-edozi ịdị elu: Desktọpụ Kọmputa na-edozi ya na elu 4-Level Mechanical Lifting Height nke dabara na ọnọdụ kachasị mma.Ị nwere ike ibuli site na 75 ruo 120cm.
• Uru Ha Haziri: Ndị otu karịrị 100 nwere nka na teknụzụ na-eduga anyị.Desktọpụ Kọmputa na-agbanwe agbanwe agafeela asambodo CARB na-eme ka nchekwa zuru oke maka gị na ezinụlọ gị.
• Ihe ị na-enweta: Desk Kọmputa a na-ahazi ya nke ọma, pad òké, ngwa nwụnye, akwụkwọ ntuziaka Wụnye.Ntuziaka nnabata, akwụkwọ ikike ọnwa 12 na-enweghị nchegbu, yana ọrụ ndị ahịa nwere enyi.Oghere tebụl abụọ na-apụ n'otu ngwugwu ahụ.
• Ọrụ ndị ahịa nzaghachi ngwa ngwa: arụmọrụ na ọrụ bụ ntinye aka anyị nye ndị ahịa ọ bụla, na usoro ọ bụla nwere nkwa na-enweghị ihe ize ndụ nke ụbọchị 30.Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Kedu ihe ị nwetara na ngwugwu?
• Desktọpụ Kọmputa a na-ahazi ya n'ịdị elu
• Mpempe òké
• Ngwa nwụnye
• Wụnye akwụkwọ ntuziaka nke ọma
Nnukwu akụkụ elu: 140*60 cm
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ egwuregwu n'anya, ị nwere ike ịtọ 3 monitors ọbụna.Ị nweghị ike ịtụ egwu na tebụl ahụ dị warara nke ukwuu iji guzobe akụrụngwa gị.
Desktọpụ Height siri ike ma na-agbanwe agbanwe
• Tebụl ịde egwuregwu a haziri ahazi bu ihe ruru 120 KG nke sitere na ihe igwe dị ọcha.
• Na 4-Level Mechanical Elu elu nke dabara na kacha mma ọnọdụ.Ị nwere ike ibuli site na 75-120 cm.wee pụọ na isi ọwụwa na azụ mgbu.
Ọ bụ oche ụlọ ọrụ ahaziri ahazi na-ejikọta echiche pere mpe na ịma mma ahịrị ọgbara ọhụrụ.
Nke gara aga: Ebuli oche ụdị pụrụ iche Model HA-02
Osote: Nlereanya oche egwuregwu 1709-S
Aldwin Home Office ebuli elu oche
Kọmputa ebuli oche
Onye na-ebuli oche
Ebuli elu Kọmputa Oche
Ebuli elu oche
Jiri drawer bulie elu elu
Tebụl na-ebuli elu